AnkerWork B600 webcam yekutenderera uye kutumira parunhare [Ongororo] | Nhau Gadgets
Anker anoenderera mberi nekushanda kuti ape akawanda edzimwe nzira uye sarudzo muchimiro chezvishongedzo zvemarudzi ese evashandisi, ingave ine MagSafe majaja, maturusi uyezve, nemawebhucams, rimwe rematavi ayo kwainopenya zvakanyanya kune sarudzo uye. hunhu hwavanopa, Ndosaka pachiitiko ichi tinodzokera kune gakava zvakare nechigadzirwa cherudzi urwu.
Isu tinoongorora zvakadzama AnkerWork B600 webcam, chishandiso chakagadzirirwa kuita teleworking uye kutepfenyura, chine chiedza, maikorofoni uye vatauri. Usazvipotsa nekuti yakamisikidzwa seimwe inonakidza imwe nzira yekuvandudza chigadzirwa chako.
3 Kuisirwa uye inogadziriswa software
4 mukushandiswa kwezuva nezuva
5 Pfungwa yeMupepeti
Iyi nyowani Anker kamera inogara nhaka iyo rectangular dhizaini nemakona akatenderedzwa atiri kuona mumidziyo yayo yapfuura. Kunyangwe chiri chokwadi kuti, sekune mamwe ma "unboxings" aAnker, mhando inonzwisiswa kubva panguva yekutanga padanho rekuvaka, kunyangwe mune zvishandiso senge tambo. Isu tine chikamu chekumashure kwatinowana maviri USB-C madoko, anodiwa kune simba uye mufananidzo kutapurirana, pamwe ne USB-A chiteshi inozoshanda sechiteshi.. Kune chikamu chayo, zvakapoteredzwa zvakagadzirwa nemucheka, kunyatsoburitsa ruzha rwevatauri vayo vakabatanidzwa.
Isu tine nharembozha inotibvumira kugadzirisa webcam kumusoro kwechero skrini, uye isu tinokwanisawo kukwana mujinga rezasi chero mhando yerutsigiro rweserura kana makamera, ndizvoIyi ndiyo sarudzo yandakasarudza sezvo ini ndisiri kuzoiita yakabatana zvachose kune iyo skrini.
Iyo yekumberi chikamu ndeye mwenje we LED inovhura nehinge uye inodzivirira lenzi. Pamativi isu tine mabhatani maviri ekubata maikorofoni uye mwenje, chimwe chinhu chatinogona zvakare kudzora kubva kune application pachayo.
Iyi kamera inen 2K yakanyanya kugadziriswa sensor kunyangwe tichigona kuzvigadzirisa zvinoenderana nezvido zvedu, hongu, nekugona kwe 30 mifananidzo pasekondi, kunyangwe kusiri kuti isu tinoda zvakawanda kushanda kana kuyerera. Iyo sensor size ndeye 1/2.8 inches uye ine otomatiki exposure system, otomatiki chena bharanzi system, otomatiki kutarisa uye kuona kwemunhu uye kuronda basa, hapana chimwe uye hapana zvishoma.
Kune rimwe divi tinaro maikorofoni ina bidirectional pamwe chete nevatauri vaviri ve2W imwe neimwe kupa stereo uye yakajeka ruzha paunenge uine hurukuro, zvese neAuto Echo Cancellation uye hongu kudzima ruzha rwekufona, zvichibvumira chete izwi kuti rinzwike. Isu tinogumisa kuti iyi AnkerWork B600 yakanyatsoshongedzerwa padanho rehunyanzvi, kunyangwe isu tichazotaura nezvekuita kwayo-chaiyo-nguva gare gare.
Muchidimbu, iyi Anker AnkerWork B600 iri Plug & Tamba, neizvi ndinoreva kuti ichashanda nemazvo chete nekuibatanidza kune chiteshi USB-C kubva pakombuta yedu. Yayo yekugadzira intelligence system uye autofocus kugona kunofanirwa kukwana kune yedu zuva nezuva. Zvisinei, zvakakosha kuva nepurogiramu yekutsigira, munyaya iyi yatiri kutaura nezvazvo AnkerWork kuti iwe unogona kurodha mahara, mairi tichawana sarudzo dzakawanda, asi chakanyanya kukosha mukana wekuvandudza webcam software uye nekudaro uchiwedzera rutsigiro rwayo.
Mune software iyi isu tichakwanisa kugadzirisa matatu ekuona angles e 68º, 78º uye 95º, pamwe nekusarudza pakati pezvinhu zvitatu zvekutapa pakati zvisarudzo zvakasiyana-siyana kuenda kuburikidza nemukana wekugadzirisa iyo FPS, kumisikidza uye kumisa iyo inotarisa, iyo HDR uye a Anti-Flicker basa zvinofadza chaizvo kana isu tichivhenekerwa ne LED bulbs, iwe unoziva kuti mune idzi zviitiko zvinofinyamisa zvinowanzoitika zvinogona kutsamwisa, chimwe chinhu chatisingazo dzivirira zvakanyanya. Kunyangwe zvese, isu tichava neatatu default modes zvichienderana nezvatinoda izvo mune dzidziso kuwana zvakanyanya kubva Anker's AnkerWork B600.
Tinokukurudzira iwe muchiitiko chaunofunga pane ino kamera inowanikwa paAnker webhusaiti uye paAmazon, kuti iwe unokasira kuisa Anker Work uye kutora mukana wekuvandudza firmware yekamera.
mukushandiswa kwezuva nezuva
Iyi kamera yahwina mibairo miviri kuCES 2022 uye ndizvozvo nekuti takatarisana ne "All-in-One", chishandiso chinokwanisa kudzikisa huwandu hwe "clunkers" hwatinahwo padhesiki redu nekuda kwekuunza vese pamwe chete mukati. imwe chete. Mukuwedzera, inoshanda nemazvo munzvimbo dzese, nenzira iyi, Yakave yedu yakasarudzika kamera yevhiki nevhiki iPhone Nhau Podcast kwatinogovana ruzivo nezve zviitiko zvazvino munyika yetekinoroji zvakazara.
Apa ndipo payakaratidza hunyanzvi hwayo, kunyanya nekuda kweiyo LED mwenje sisitimu iyo isu tichakwanisa kupedza dhigirii pakati peinotonhora uye inodziya toni, sezvo iyi yatichangobva kutaura ndiyo chaiyo chinhu chekuvhenekesa chinoshandiswa.
Iyo kamera ine VoiceRadar Muchiitiko chekuti isu tafunga kushandisa maikorofoni ayo, ichi hachisi chimwe chinhu kunze kwekunze kweruzha kudzima sisitimu inojekesa mashandiro ekufona uye kuti mumiedzo yedu yakaratidza kuti inoshanda zvakanyanya mukubvisa ruzha rwekumashure uye kutarisa chete kune vanopindirana. .
Mukuwedzera, iyo kamera ine system furemu chete, iyo isiri chinhu kunze kwekutevera kwakananga kwemunhu, nguva dzose achivachengeta pamberi. Mumiyedzo yedu, yakaratidzwa kuve inoshanda zvakanyanya padanho rekutarisa uye nekutevera pachayo, chimwe chinhu chatakaona mukuvandudza kwemabasa.
unogona kuita nayo AnkerWork B600 kutanga pa229 euros pane Anker webhusaiti, kana zvakananga kuburikidza neAmazon, kunyangwe iwe uchizoiwanawo mune dzimwe nzvimbo dzakajairika dzekutengesa.
Nenzira iyi, inomisikidzwa seimwe yeakanyanya kukwana uye anochinja-chinja All-in-One kamera pamusika uye paActualidad Gadget hapana chimwe chatingaite kunze kwekuchikurudzira.
Yakatumirwa pa: May 1 we2022
Kugadziridza kwekupedzisira: May 1 we2022
Zvakasiyana-siyana uye maitiro
Inofanira kusanganisira kickstand
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » AnkerWork B600 webcam yekushambadzira uye kufonera [Ongororo]